Zvigadzirwa vagadziri uye vatengesi - China Zvigadzirwa fekitori
Girazi Railing Standoff
Girazi Spider Fittings
Stainless Simbi Kutuka Post
Magetsi Simba Fittings
Nyama Grinder zvishongedzo
Mamwe Machina Zvikamu
Pombi Valve Zvikamu
Zvigadzirwa zvemagetsi zvemagetsi Kukanda emagetsi ...
Magetsi emagetsi kukanda Zvishandiso zvemagetsi
Magetsi magetsi emagetsi, Simba zvishandiso zvichikanda
Pombi vharuvhu zvikamu-36
Kukanda simbi inzira yemazuva ano ine midzi yekare. Muchikamu chekukanda simbi, maumbirwo esimbi anoumbwa nekudururira simbi yakanyungudutswa muforoma mhango, uko iyo inotonhorera uye ndokuzotorwa kubva muforoma. Simbi yekukanda ingangodaro yekutanga uye ine simba zvakanyanya mumaindasitiri maitiro munhoroondo. Yaigadzira zvinhu zvakawanda zvesimbi zvinoshandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva: zvikamu zvemotokari, mavhiri ezvitima, zvigadziko zvemarambi, zvikwiriso zvemabhazi echikoro, uye zvimwe zvakawanda.
Pombi vharuvhu zvikamu-44
Pump Valve Zvikamu Kukanda pombi vharafu zvishongedzo
Handrail chikomboredzo, High yepamusoro Kudzingwa maitiro
Simbi yekukanda ingangodaro yekutanga uye ine simba zvakanyanya mumaindasitiri maitiro munhoroondo. Yaigadzira zvinhu zvakawanda zvesimbi zvinoshandiswa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva: zvikamu zvemotokari, mavhiri ezvitima, zvigadziko zvemarambi, zvikwiriso zvemabhazi echikoro, uye zvimwe zvakawanda.
Circle Core Spigot, Nyanzvi tsika kukanda zvishongedzo vagadziri
Innovations mune otomatiki enzira dzekutsika senge General Kinematics Sand Kukanda Conditioner zvaita kuti kugadzirisa kwakakura kuwanda kwekukanda kuve nyore pamwe nekuvandudza mhando yeanokanda.
Kukanda simbi inzira yemazuva ano ine midzi yekare. Muchikamu chekukanda simbi, maumbirwo esimbi anoumbwa nekudururira simbi yakanyungudutswa muforoma mhango, uko iyo inotonhorera uye ndokuzotorwa kubva muforoma. Simbi yekukanda ingangodaro yekutanga uye ine simba zvakanyanya mumaindasitiri maitiro munhoroondo.
123456 Inotevera> >> Peji 1/35
LongJu Economic Nzvimbo, Dongying Guta, Shandong Dunhu, China.
nokunyora magwaro kune Kubvunzurudza Kwedu
For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, tapota nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa makumi maviri nemana.